आठ वर्षमा के गर्लान् बाबुरामले ? यस्तो छ रोडम्याप « Pahilo News
आठ वर्षमा के गर्लान् बाबुरामले ? यस्तो छ रोडम्याप
प्रकाशित मिति :4July, 2016 2:16 am
‘रातो भालेको अगाडिबाट सीधै तलतिर आउनूस्, बाटैमा पर्छ ।’
तपाईंले पनि यही सूचना पछ्याउनु भयो भन्ने नेपालको सबभन्दा कान्छो राजनीतिक दल– नयाँ शक्ति नेपालको केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालयमा पुग्नुहुनेछ । कसैले नयाँ शक्तिको कार्यालयको ‘लोकेसन’ सोध्यो भने यही उत्तर पाइन्छ ।
इमेलबाट सदस्य बन्न पाइने यो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय खोज्न पनि त्यति गाह्रो छैन । त्यहाँ अहिले भीडभाड छ । मानिसहरुको चहलपहल बढी नै छ । साँघुरो बाटोकै छेउमा गाडीको बाक्लो पार्किङ छ । अघिल्तििर रहेको बनप्राविधिक संघको भवनको छेउमा पनि नयाँ शक्तिकै कार्यालयमा आएकाहरुका सवारी पार्किङ गरिएको पाइन्छ ।
नयाँ रंगरोगन गरिएको पुरानो घरको पहिलो तलामा भेटिन्छन्, संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई । उनका लागि थप कुनै परिचय त आवश्यक पर्दैन । नेपालका सफल पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री उनको अर्को पद थपिएको छ, पूर्वमाओवादी नेता । २०२६ सालका ‘बोर्ड फस्ट’ भट्टराई आठ वर्षमै नयाँ शक्तिलाई ‘फस्ट’ बनाउने महत्वाकांक्षी योजनाका साथ होमिएका छन् ।
आठ वर्ष किन ? किनभने, अहिले उनी ६२ वर्षका भइसके । र, ७० वर्षमा अवकाश लिने घोषणा गरेका छन् ।
गत शुक्रबार एउटा संयोगमा डा. भट्टराईसँग उनकै कार्यालयमा भएको भेटमा त्यो प्रसंग आफैँले निकाले । बुद्धिजीवी डा. विजय पौडेलले ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध’ मा केन्द्रित रहेको प्रकाशन गर्न लागेको पुस्तकका बारेमा वार्ता गर्न उनीसँग भेट निर्धारित थियो । डा. भट्टराईले सोधे, ‘प्रश्रितजी (डा. पौडेलका बुबा, मोदनाथ प्रश्रित) ले राजनीतिबाट पूरै विदा लिनुभएको हो ?’
६२ वर्षमा नयाँ पार्टी ! ‘डाक्टर साब, यो त बुढेशकालमा विहे गरे जस्तो भएन र ?’ प्रश्न भूइँमा खस्न नपाउँदै उनले जवाफ फर्काइहाले, ‘सन्तानको आवश्यकता प¥यो भने बुढेशकालमै पनि विहे गर्न सकिन्छ ।’ यो ‘विहे’ उपलब्धिमुलक हुनेमा उनमा विश्वास देखिन्छ । तर, उनका सारथीहरु राजनीतिमा त्यति स्थापित छैन्न् । उदाहरणका लागि उनका तीन जना सहसंयोजकलाई हेर्दा हुन्छ ।
मोदनाथ प्रश्रितले ०६५ सालमा बुटवमा आयोजित एमालेको आठौँ महाधिवेशनबाटै घोषणा गरेर विदा लिएका थिए ।
डा. भट्टराईले फेरि सोधे, ‘उहाँ ७० पुगिसक्नुभयो ?’
प्रश्रित ७५ पुगिसकेका छन् भन्ने थाहा पाएपछि आफैँ थपे, ‘म पनि अब आठ वर्ष मात्र सक्रिय राजनीतिमा रहन्छु, ७० मा छाडिदिने हो ।’
अनि बाँकी आठ वर्षमा नयाँ शक्ति नेपाललाई नम्बर एकमा पु-याउन सक्लान् त ? ‘संकेत राम्रै पाएको छु, रेस्पोन्स राम्रै छ’, उनी आशावादी देखिए, ‘सबैतिरबाट प्राप्त सहयोगले उत्साहित बनाएको छ । हेरौँ, काम गर्दै जाने हो ।’
६२ वर्षमा नयाँ पार्टी ! ‘डाक्टर साब, यो त बुढेशकालमा विहे गरे जस्तो भएन र ?’
प्रश्न भूइँमा खस्न नपाउँदै उनले जवाफ फर्काइहाले, ‘सन्तानको आवश्यकता प¥यो भने बुढेशकालमै पनि विहे गर्न सकिन्छ ।’
यो ‘विहे’ उपलब्धिमुलक हुनेमा उनमा विश्वास देखिन्छ । तर, उनका सारथीहरु राजनीतिमा त्यति स्थापित छैन्न् । उदाहरणका लागि उनका तीन जना सहसंयोजकलाई हेर्दा हुन्छ ।
रामचन्द्र झा एकजना असहिष्णु, नागरिकता नै विवादमा परेका र तीन वर्षमा तीन पार्टी फेरिसकेका मधेसका नेता हुन् । एमालेमा पटकपटक मौका पाएका झा तीन वर्षअघि एमाओवादीमा लागेका थिए, भट्टरार्इंले नयाँ पार्टी बनाएसँग उनलाई काँध हालेका छन् ।
अर्का सहसंयोजक महेश कर्मोचा कांग्रेसका पुराना नेता हुन् । पञ्चायतकालमा राजतन्त्रका विरुद्ध ठूलो लडाइँ लडेका ती पुराना नेता पछिल्ला शाही कदमका भने समर्थक बने र ओखलढुंगा जिविसका ‘टीके’ सभापति बने ।
डोटीकी दुर्गा सोब कुनै बेला कांग्रेसको कोटामा राष्टिय दलित आयोगकी सदस्य सचिव बनेकी थिइन् । एनजीओकर्मी उनलाई राजनीतिका बारेमा धेरै कुरा थाहा छ भन्ने उनीबाहेक अरुलाई थाहा छैन ।
पूर्वकर्मचारी, पूर्वप्रहरी, एनजिओकर्मी, कलाकार आदि बोकेर नयाँ शक्ति बनाएका बाबुराम भट्टराईले साँच्चै केही गर्लान् ? यदि उनको पार्टीले गति लियो भने बेफाइदा कसलाई होला ?
देखाउन पात्र अरु भए पनि काम गर्ने र जिल्लामा संगठन गर्ने चाहिँ पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता नै छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ, बाबुरामको पार्टी बलियो भयो भने त्यसबाट बेफाइदा माओवादीलाई नै हुनेछ । तर, सिद्धान्तमा माओवादीभन्दा टाढा रहेका कारण त्यसको प्रभाव कांग्रेस–एमालेलाई पनि पर्नेछ भन्नेहरुको कमी छैन ।
उनी फेरि दोहोर्याउँछन्, ‘रेस्पोन्स राम्रै पाएको छु जहाँ–जहाँ पुगेको छु, त्यहाँको माहौल राम्रै छ ।’
नयाँ शक्तिको मूल स्रोत माओवादी नै हो । देखाउन पात्र अरु भए पनि काम गर्ने र जिल्लामा संगठन गर्ने चाहिँ पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता नै छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ, बाबुरामको पार्टी बलियो भयो भने त्यसबाट बेफाइदा माओवादीलाई नै हुनेछ । तर, सिद्धान्तमा माओवादीभन्दा टाढा रहेका कारण त्यसको प्रभाव कांग्रेस–एमालेलाई पनि पर्नेछ भन्नेहरुको कमी छैन ।
के होला भविष्य ?
१० वर्षे जनयुद्धको देखिने र पत्याइने ‘आइकन’, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुराम भट्टराईले यत्तिकै बुढेशकालमा जोखिम उठाएका छैनन् । र, उनलाई चलचल्तीका हल्का शब्दमा कुनै विदेशी शक्तिसँग जोडेर छुटकारा पनि पाइँदैन । युवाकालदेखिको माओवादी आन्दोलनको सपनाको अन्त्यपछि बाबुराम भट्टराईमा जुन चेतना आएको छ, त्यसले नयाँ निकास खोजेको अर्थमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।
भोलिका दिनमा अरु दल अलोकप्रिय हुँदै जाँदा आफ्नो ढडियामा माछा परिहाल्छ कि भन्ने आशमा उनले नयाँ शक्ति गठन गरेका छन् । कुनै दिन उपेन्द्र यादव वा महन्थ ठाकुरको दलसँग डा. भट्टराईको नयाँ शक्तिको एकता भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । त्यसपछि साँच्चै यसले राजनीतिका केही न केही धक्का चाहिँ पुर्याउँछ ।
माओवादीभित्र निरन्तरको आक्रमण र अपमानबाट आजित भएका भट्टराईले जति वर्ष कुरे पनि पहिलो नम्बरमा पुग्ने सम्भावना देखेनन् । सीधै यस्तो भन्दा उनले आफूलाई पदलोलुप रुपमा चित्रित गरिएको गुनासो गर्लान्, तर नयाँ पार्टी बनाउनुको एउटा मुख्य कारण यही नै हो ।
दिल्लीमा अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका एकजना सक्रिय अनुयायी अरविन्द केजरीवालले आम आदमी पार्टी बनाएर तरक्की देखाएपछि बाबुराम भट्टराईले नेपालमा नयाँ शक्तिको बहस आरम्भ गरेका थिए । पछि, पुष्पकमल दाहालले उधारो अध्यक्षको आश्वासन दिएपछि ‘माओवादीलाई नै नयाँ शक्ति बनाउने हो’ भन्दै उनी केही समय चुप लागेका थिए । तर, माओवादीभित्र निरन्तरको आक्रमण र अपमानबाट आजित भएका भट्टराईले जति वर्ष कुरे पनि पहिलो नम्बरमा पुग्ने सम्भावना देखेनन् । सीधै यस्तो भन्दा उनले आफूलाई पदलोलुप रुपमा चित्रित गरिएको गुनासो गर्लान्, तर नयाँ पार्टी बनाउनुको एउटा मुख्य कारण यही नै हो ।
‘अबको निकास, आर्थिक विकास’ भन्ने आकर्षक नारा दिएका भट्टराईलाई थाहा छ, त्यो कार्यान्वयनका लागि नेतृत्व चाहिन्छ र त्यस्तो नेतृत्व संगठन नभई आउँदैन । संगठन निर्माणमा भन्दा विचार निर्माणमा भूमिका देखिँदै आएका भट्टराईका लागि त्यो काम सहज छैन ।